Umculo wokholo ohlanganiswe ne-jazz | News24
Umculo wokholo ohlanganiswe ne-jazz
ISITHOMBE: JYOTHI LALDAS UMnuz Nathi Mbonambi uthe umculo wakhe wokholo uhlukile ngoba uhlanganiswe ne-jazz.
UMCULI we-gospel uMnuz Nathi Mbonambi, waseGroutville, KwaDukuza, uthe kuyintokozo kuyena ukuthi uze wakwazi ukufeza iphupho lakhe lokuthi aqede ukwenza i-album yakhe yokuqala yomculo wokholo.
Isihloko se-album kaMnuz Mbonambi sithi: The Beginning, ikhishwe ngaphansi kwenkampani yakhe ebizwa ngokuthi Lusanda Entertainment.
Uthe: “Umculo wami wenziwe ngendlela ehlukile kuna manye ama-album e-gospel ngoba owami uhlanganise umculo we-jazz kanye nowe gospel,” kusho uMnuz Mbonambi.
Uqhube wathi ingoma etholakala kule album isihloko sayo esithi: ‘Konke Kuzoshabalala’ isidlala eziteshini ezidlala umculo wokholo njengo uKhozi, Izwi loMzansi kanye neGagasi FM.
UMnuz Mbonambi uthe: “Kungithathe unyaka ukuthi ngihlanganise le-album enama noni angu-14. Kulezi zingoma kukhona eyenzelwe uMadiba bese kuba khona ekhuluma ngokubumbana kwabantu bezwekazi lase Africa,” kusho yena.
Uthe ubonga nemithandazo yabantu akhonza nabo kanye nabafundisi base bandleni lakhe i-Wisdom For Christ Church International uMfu Gwala noMfu Hadebe kanye noBishop Khanyile.
Uthe: “Ngifisa ukubonga umndeni wami ongisekelayo, abantu engisebenze nabo, abalandeli bami, umphakathi wonke waKwaDukuza kanye neziteshi zomphakathi. Ngifisa nokubonga uMnuz Tshepo Ncukela,” kusho yena.
Uthe usebenzisane noMnuz Fiso Fakude odume ngezi ngoma zothando, uSandy Dee waseNanda, eThekwini, uMnuz Isaya Mbonambi odume ngengoma ethi uJesu Ungena Kuqala.
Uqhube wathi i-album yakhe itholakala kuyena okwa manje. Ungaxhumana naye uMnuz Mbonambi enobolweni ethi 072 554 1973 noma uye e-Music World, eThekwini. Ibiza imali engu-R50.
Uthe ufisa ukubonga abalandeli bakhe ngoba ngaphandle kwabo ngabe umculo wakhe awusiyona impumelelo.